Lohahevitra mafana ny lohahevitra eoropeanina mora vidy. Voalohany indrindra, mpizaha tany tany Eoropa afaka mahita ny zavatra rehetra avy amin'ny lehibe fivarotana kafe ny tsara tarehy tora-pasika. Noho ny tanàn-dehibe toy ny Venice, Roma, ary Paris mpizaha tany an-tapitrisany Travel any Eoropa isan-taona. Efa namorona ny lisitry ny toerana mora indrindra Eoropeana ho an'ny mpamaky. Ity lisitra ity dia misy ny fomba hahatongavana any amin'ny lamasinina.
Seville dia nametra-miverina tanàna. Ankafizo ny tolakandro siesta. Jiosy, Kristiana, ary ny kolotsaina Silamo. Mitsidika fiangonana fahiny ary ghettos nandritra ny andro. Ny sakafo no matsiro, indrindra fa ny Tapas. Ny gitara impromptu mozika eo amin'ny eny an-dalambe hoe nambabo ny sasatra rivotry ny Sevilla. Eoropa toerana io Cheap tanàna angamba ny tsara indrindra hatsarany any Eoropa sy manan-karena tantara.
Valencia manana 3 tsara tarehy tora-pasika. Vokatr'izany, manana hetsika any ivelany be izy io. A Cheap Eoropa valan-javaboary dia toerana lehibe ho an'ny tongotra lavitra. Ny valan-javaboary nasionalin'ny La Albufera toerana lehibe ho an'ny tongotra lavitra. Foodies koa tia Valencia noho ny vokatra vaovao.
Fa ny toro-lalana momba ny fomba hahazoana ny Valencia ny Station North miditra amin'ny tranokala Save A Train ny gara.
Mahatalanjona iray hafa, ary mora vidy tanàna Istanbul. Satria Tiorka renivohitra miara-mitondra Eoropa sy Asia. Manan-karena amin'ny lova, trano tsara tarehy, sy ny endrika ivelany. Skylines domes sy ranomasina manga mahafinaritra eo akaikin'i Istanbul. Ity tanàna ity no ho lehibe ny saina amin'ny fomba fijery mahagaga, fofona, ary maneno manerana ny renivohitra. Ny sakafo malaza eto dia ny doner kebab sy ny tiorka mamy treats izay afaka ho novidina teny an-dalana. Zavatra rehetra voalaza ireo dia azo nahatsapa tena antonony vidiny
Raha mila torolàlana momba ny fomba hahatongavana any amin'ny Station Sirkeci any Istanbul, mandehana mankany amin'ny tranokala Save A Train.
Mikasa ny handeha ho any amin'ny toeran-kaleha any Eropa ve ianao?? Nahoana raha 3 minitra mba hitady ny levitra lamasinina nandehanany. Login amin 'ny tranonkala dieny izao, ary hahazo ny tsara indrindra ho fanolorana, fifadian-kanina sy mora. Manaiky lehibe rehetra ampy vola.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcheap-european-destinations%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)